Oraahdii Oktoobar | Saadaasha Shabakadda
Oktoobar. Bisha ay caleemaha geedaha dhirtu ku soo baxaan midabbadaas sida, jaallaha ama casaanka. Qaarkood waxay bilaabaan inay dhacaan, gaar ahaan haddii ay ku sugan yihiin aagagga buuraha, halka, jawiga, xaaladaha ugu habboon ee jira ay dabeyluhu u sameysmaan.
Dabaysha diirran ee aynnu haysannay ilaa maanta, ayaa marba marka ka dambaysa sii qabowsanaysa, sidaas awgeed ayaa waqtigu nagu khasbayaa inaan la soo baxno jaakadahayaga iyo saraawiisha dhaadheer haddii aannaan doonayn inaan hargab qabsanno. Maxay bishan noo qabanaysaa? Si aad u ogaato, waxaan kuu soo sheegi doonnaa sida caadiyan ay tahay bishan, waxaanna ku soo afmeeri doonnaa oraahda Oktoobar. Ha moogaan
1 Waa sidee jawigu bisha Oktoobar gudaha Isbaanish?
2 Maahmaahda saadaasha hawada ee bisha Oktoobar
Waa sidee jawigu bisha Oktoobar gudaha Isbaanish?
Bisha sida caadiga ah way diirran tahay qaybo badan oo dalka ka mid ah, sida gobolka Mediterranean, laakiin guud ahaan, lheerkulka wuxuu bilaabayaa inuu hoos udhaco halka barafku ugu horeeyo sanadka uu ka dhaco. Sidoo kale, bisha Oktoobar inta badan roobab badan ayaa ka da'a gobollada qaar, laakiin mararka qaar gobollada kale aad ayey u qalalan tahay, iyadoo sii xumeyneysa dhibaatada abaarta.
Waa in la ogaadaa in Oktoobar ay badanaa yimaadaan duufaanno siyaado ah, mararka qaarkood loo yaqaan cyclogenesis qarxa. Noocyada noocan ah ee duufaannada waxaa sameeya hoos u dhaca halista ah ee cadaadiska jawiga, oo isu rogi kara duufaan aad u xoog badan saacado yar gudahood. Waxay badanaa ku dhacaan latitude sare, inta udhaxeysa 55 iyo 60º, maadaama ay saameyn ku leeyihiin dhaqdhaqaaqa wareega ee meeraha; Laakiin marka laga hadlayo Spain, markay tahay 45ºN, waxay dhici karaan marka cadaadisku hoos u dhaco inta u dhexeysa 18 iyo 20mB 24 saacadood.
Maahmaahda saadaasha hawada ee bisha Oktoobar
Thanks to oraahyada, waxaan ogaan karnaa waxa cimiladu caadi ahaan qabato bisha tobnaad ee sanadka. Kuwani waa:
Waxaa qoray Saint Simon, duqsi kastaa wuxuu u qalmaa labalaab: qabawgii ugu horreeyay, duqsigii xagaaga oo dhan ina dhibayay, ayaa baaba'aya.
Marka waqtiga St. Gallen yimaado, saca lo'da deggan ayaa deggan: xayawaanku waxay dareemaan isbeddelka xilliga, marka laga bilaabo Oktoobar 16 (maalinta St. Gallen) haddii aad haysato xayawaan gurijoog ah waxaad arkaysaa inay iyagu iska ilaalinayaan qabowga.
Dhanka Virgen del Pilar, waqtiga ayaa bilaabmaya inuu is badalo: maalinta Virgen del Pilar, Oktoobar 12, badanaa waa dhammaadka kuleylka iyo bilowga xilli-roobaadka dayrta.
Oktoobar hoosku wuu cararaa; laakiin haddii qorraxdu soo baxdo, iska jir qorrax dhaca. Maalmaha qabow ee ugu horeeya kadib, waa wax caadi ah inaan maalmo yar haysano heerkul aad u sareeya markale, marka hadii taasi dhacdo, waxaa lagama maarmaan noqon doonta inaan is ilaalino.
Dayrta Castilla waa wax lala yaabo: waana run. Heerkulku, ma ahan mid aad u sarreeya ama aad u hooseeya, wuxuu kugu martiqaadayaa inaad baxdo, si aad ugu raaxaysatid dabeecadda, inaad ugu baxdid qaxwada berriga.
Roob Oktoobar, sanad balaaran: waa bil ay roobabku aad u badan yihiin.
Biyaha Oktoobar, miraha ugu fiican ayaa xumaada: Haddii roobku da'o, miraha way dufan karaan, si shaqadii sannad dhan ay u lumaan.
Xeebaha Levante, daadadka iyo daadadka, waxay ka muuqdaan Oktoobar: xilligan roobab mahiigaan ah oo ka da'a badda Mediterranean-ka ayaa caadi ah.
Bisha Oktoobar ee caleemaha berrinka ayaa nafaqeeya: caleemaha geedaha dhirtu waxay bilaabaan inay soo dhacaan, si dhulku ugu daboolo iyaga.
Cordonazo ee San Francisco waxaa lagu xusay, dhulka iyo badda labadaba: Qiyaastii 4-aad, iiddii San Francisco de Asís, qabowgii ugu horreeyay ee cirifka ayaa badanaa la yimaada roobab iyo dabeylo ka yimaada Woqooyi-galbeed oo loo yaqaan 'Cordonazo de San Francisco ».
Bishii Oktoobar, xaabada qoryaha ayaa daboola: taas oo aad muhiim ugu ah haddii aynaan rabin in hargab nagu dhaco.
Waxay ka tagaan xusuus cabsi leh duufaankii Oktoobar bilaabmay: haddii roobab xoog leh oo da'aya ay dalagyadu xumaadaan, taas oo cawaaqib xumada ka dhalanaysa beeralayda.
Marka Oktoobar onkod, dabayshu waxay qaaddaa: Duufaannada bishaan waxaa badanaa la socda dabayl, oo qabow ah.
Benign September, ubax Oktoobar: haddii heerkulka iyo roobka bisha Sebtembar ay caadi ahaan sii ahaadaan ama ka yaraadaan, bisha Oktoobar waxaan heli doonnaa bil ay beeluhu isku rogi doonaan, iyo dhirta khudradda ayaa awoodi doonta inay dhammaystirto bislaanshaha.
Biyaha ugu horreeya Oktoobar, wax beero oo daboolRoobabkii ugu horreeyay ka dib, waxaa la joogaa xilligii la beeri lahaa basasha, kalluunka, kaabashka, salaanta xilliga qaboobaha, toonta, raayadaha, iyo dhir kale oo badan oo khudaar leh. Ka dib markii ay beero, waxaa lagu daboolaa carro yar si ay u soo bixi karaan dhib la'aan.
Oktoobar waa bil inbadan oo naga mid ahi ka helaan. Heerkulka wanaagsan ee maalintii, annaga oo isku daboolayna busteha habeenkii, innagoo awood u leh inaan ku raaxeysano waqtiga bannaanka ayadoon aad u dhididin,… waa wax weyn. Waa sida guga labaad. Ku raaxayso 🙂.
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Saadaasha hawada » Erayada october
haddii roob da’o bisha oktoobar waxay dabooshaa toddobada dayax
waad ka faaloon kartaa, waxaan u maleynayaa inay tahay bil cusub